Ukuhlaziywa kwe-DxOMark ye-LG V40 ThinQ yoPhononongo kunye nokunyusa amanqaku ayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-DxOMark ihlaziya i-LG V40 ThinQ uphononongo kwaye iphakamisa amanqaku ayo
UAron Rivas | | LG, Izaziso
I-DxOMark ipapashe ifayile ye- hlaziya uphononongo lwakho lwe LG V40 ThinQ elingaphezulu kwenqaku lilonke, ephele ingu-94, ngenqaku eli-1 ngaphezulu kwesiphumo sokuqala seentsuku ezimbalwa ezidlulileyo (93). Ukulungiswa kungenxa yempazamo abayifumeneyo kolunye uvavanyo lwabo.
Inqaku lesibini elitshintshiweyo lihambelana nokuBonakaliswa kunye nokwanda, ukusuka kumanqaku angama-83 ukuya kuma-88, athe azisa amanqaku emifanekiso ukuya kuma-98, xa kuthelekiswa namanqaku ayi-96 okuqala kweli candelo, nto leyo ethe yakhokelela ekubeni ukuphucuka okuncinci kwiziphumo zizonke.
Ekugqibeleni Ababuyekezi bancoma i-V40 ThinQ ngokuchazwa kwayo ngaphakathi, kodwa abanamdla kangako malunga nendlela ifowuni evezwa ngayo ngaphandle. Imibala icacile kwaye iyathandeka, batsho, kwaye iinkcukacha zimelwe kakuhle kwimipu yangaphandle.
Khumbula oko Isiphelo sixhotyiswe ngekhamera engasemva kathathu eyenziwe nge-12 MP optical sensor (f / 1.5, 1,4 μm kunye nama-78 degrees ububanzi), i-angle engama-16 MP ububanzi (f / 1.9, 1,0 μm kunye no-107 degrees) kunye nelensi yomnxeba eyi-12 MP (f / 2.4 , 1,0 μm kunye nama-45 degrees). Ngokudibeneyo, ezi khamera zintathu zazinoxanduva lokureyitha enikwe iqonga lesalathiso kwiselfowuni yaseMzantsi Korea.
Ukucaphula isicatshulwa kwi Oku kubhaliwe, izixhobo ezintlanu eziphezulu kuluhlu lwe-DxOMark okwangoku zezi Huawei P30 Pro (112), ifayile ye- I-Samsung Galaxy S10 5G (112), ifayile ye- Umlingani 20 Pro (109), ifayile ye- P20 Pro (109) kunye Galaxy S10 Plus Izimvo eziyi-109. Inkqubo ye- Xiaomi Mi 9 Utyhalelwe kwindawo yesithandathu, ngamanqaku ali-107. Oku kubonisa ukuba I-LG V40 ThinQ ayisiyiyo enye yeendlela ezifanelekileyo ukuba ujonge ezona khamera zibalaseleyo, kodwa ewe kulungile ukuba uyiqwalasele.
I-LG V40 ThinQ isungulwe ngokusesikweni eSpain
Isishwankathelo esipheleleyo kunye novavanyo lweesampulu, intloko ukuya kuvavanyo lwe-DxO ngokunqakraza kwikhonkco lomthombo apha ngezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-DxOMark ihlaziya i-LG V40 ThinQ uphononongo kwaye iphakamisa amanqaku ayo
I-LG patent i-smartphone eneekhamera ezintandathu
Umtsalane !! Khuphela kwaye ufake usetyenziso lomculo lwe-Samsung Galaxy S10 kuyo nayiphi na i-Android